Gelitaanka iyo isticmaalka `iftineducation.com` waxa uu ku xiran yahay shuruudahan:
1.Haddii aad doonayso isticmaalka ´ iftineducation.com` waxaa lagaaga baahan yahay inaad u hoggaansanto sharciga isla markaana oggolaato shuruudaha hoos ku qoran, kuwaas oo dhaqan gelaya iska marka aad isticmaasho `iftineducation`. Haddii aadan sharciga u hoggaansamaynin ama aadan oggolayn dhammaan shuruudasaas, fadlan ha gelin, ha isticmaalin, waxna ha ku biirib ´iftineducation.com`.
2, iftineducation waxay, xilli kasta, beddeli kartaa shuruudaha kor ku xusan. Sidaas darteed, waa inaad mar kasta iska hubisaa shuruudahaas. Isticmaalka `iftineducation oo aad sii wadatid waxa uu ka dhigan yahay inaad aqbashay wax ka beddelka ama wax ku kordinta shuruudaha. Haddii aadan oggolayn isbeddelka lagu sameeyey sharuudaha, waa inaad joojisaa isticmaalka website-ka.
3. Waxaa oggolaanaysaa inaad `iftineducation`u isticmaasho sí sharciga waafaqsan iyo sí aan waxba u dhimayn xuquuqda dadka kale ama aan xaddadaynin ama aan hor-istaagaynin istimaalka dadkaas ay isticmaalayaan iftineducation. Habdhaqanka mamnuuca ah waxaa ka mid ah rabshad loo geysto, degganaansho laáan lagu abuuro ama dhib loo geysto qof kale, sida ayada oo loo gudbiyo waxyaabo anshax xumo ah ama aflagaaddo ah ama carqalad ku ah habsami u socodka wadahadallada iyo doodaha ka socda iftineducation.
4. Dhammaan xuquuqda indheergarad, xuquuqda sawirka, ruqsadaha iyo xuquuqda hanti indheergarad ee kale ( ha ahaato mid diiwaangashan iyo mid aan diiwaangashanayn intaba) ee ku jira ama ka muuqda iftineducation iyo wax kasta ee jira webka waxaa leh iftineducation iyo dadka ruqsada u haysta. Midda kale kuuma bannaana in nuqul ka samaysid, dib u saartid, dib u daabacdid, cad kala baxdid, qaabka hindise wax ka beddeshid, inaad la soo degtid, meel ku qortid, baahisid, gudbisid, dadweynaha u bandhigtid ama aad waxa uu iftineducation soo saaro u isticmaashid sí kale ee ka duwan isticmaalkaada shakhsi ama isticmaal aan ganacsi ahayn. Waxaa kale oo aad ballan ku gelaysaa in aadan waxba ka beddelayn ama aadan wax ka abuurayn wax soo saarka iftineducation, marka laga saaro isticmaalkaaga gaarka ah ee aan ganacsi lug ku lahayn. Isticmaal kasta ee kale ee la isticmaalayo waxa ku jira iftineducation waxa ku xiran yahay in iftineducation laga helo ruqsad qoraal ah.
5. Magacyada, muuqaalka iyo astaamaha lagu garto iftineducation ma cid kale ee saddexeeye ah iyo waxa ay soo saaraan iyo adeegyada waxay ka mid yihiin xuquuqda indheergarad, xuquuqda sawirka ama xuquuqda indheergarad ee iftineducation iyo dadka kale ee saddexeeyaha ahi.
6. Haddii aad iftineducation dirtid qoraal, warreysi, war maqal ah ama sawirro waxay ka adhigan tahay adiga oo iftineducation, kharash laáan, u oggolaaday innay sida ay doonto u isticmaasho ama u adeegsato heer caalami ah, ayada oo xataa la wadaagi karta cid saddexaad.
7. Maqaallada aad ku qortid ama ka baahisid iftineducation, adiga ayaa iska leh, oggolaanshahaadana ma aha mid kuu diidaya inaad istimaashid waxa aad ku biirisay iftineducation ama aad cid kale u oggolaato inay isticmaasho.
8. Sí iftineducation ay u isticmaasho maqaalka, maqalka iyo muuqaalka aad u gudbiso waa inay yihiin wax ku yimid hal-abuurkaada, isla markaana aan ahayn cay iyo wax xadgudub ku ah shauruucda Mareykanka (USA), aadna iftineducation u ruqsaynayso inay u isticmaasho ujeeddadaas kor ku cad, oggolaansho ka haysatid haddii ay jirto cid kale ee ku lug leh arrintaas ama oggolaanshaha waalidka dadkaas haddii ay dádooda ka 16 sano ka hoos tahay.
9. Waxaa aad ku qortid iftineducation waxaa lagu muujinayaa magacada, haddii aadan codsan sidaas wax ka duwan ama aysan ka horimanaynin halgalka. iftineducation waa kaala soo xiriiri kartaa waxa aad u soo gudbisid, haddii baahato faahfaahin dheeraad ah.
10. Marka aad hal-abuurkaada la wadaagaysid iftineducation, fadlan ha jebin sharciyada oo ha gelin khatar aan aan loo baahnayn.
11. Haddii aadan iftineducation siinayn ruqsadda kor ku xusan, fadlan iftineducation ha u gudbin wax maqal maqaal, maqal am muuqaal ah. Haddii waxa aad iftineducation u soo dirtid wax la xiriira akhbaar, fadlan waxaad oggaataa in akhbaartaas la la wadaagi karo dadka ay wada-shaqaynta kala dhexayso iftineducation oo dhammaan ah dad iyo hayado lagu kalsoon yahay oo ay ka mamnuuc tahay inay wax ka beddelaan waxa aad soo gudbisay.